नेकपा स्थायी समिति बैठक स्थगित ओली-दाहाललाई वार्ताका लागि समय दिँदै ! – Saurahaonline.com
नेकपा स्थायी समिति बैठक स्थगित ओली-दाहाललाई वार्ताका लागि समय दिँदै !
काठमाडौं : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी समिति बैठक स्थगित भएको छ । पार्टीभित्र उत्कर्षमा पुगेको विवादका कारण अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बैठकमा सहभागी नै नहुने अवस्था सिर्जना भएपछि बैठक शनिबारसम्मको लागि स्थगित गरिएको हो ।
कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपतिलाई भेटेर फर्किएपछि ओलीबिनै बसेको स्थायी समिति बैठकले ओलीसँग वार्ता गरेर सहमति जुटाउने निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसका लागि शुक्रबार दिनभर ओली र दाहालबीच छलफल गरेर सहमति जुटाउने जिम्मेवारी बैठकले दिएको छ।
ओलीको अनुपस्थितिमा बसेको बैठकमा दाहालले पछिल्लो विकसित घटनाक्रमका विषयमा ब्रिफिङ गर्दै अब कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे राय मागेका थिए । त्यसपछि बैठकले दुई अध्यक्षलाई सहमति जुटाउन एक दिनको समय प्रदान गरेको हो ।
चार वर्षमा ३० बलात्कारका घटना २०७७, २१ श्रावण बुधबार
सर्लाही : कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको जोखिम बढेपछि सर्लाहीमा लकडाउनको घोषणा गरिएको छ । सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला.....